ST. KITTS UYE NEVIS 60 ZUVA RAKANYANYA DZIDZO
Iyo Inokurumidza Kuita Chikumbiro (AAP) yakabvumidzwa neHurumende yeSt Kitts neNevis muna Gumiguru 2016 inobvumidza zvikumbiro neC Citizenship ne Investment Program kuti ikurumidzirwe kusvika kumazuva makumi matanhatu ekugadzirisa nguva.
Vanofarira vanoshandisa anoshandisa AAP vachazodikanwa kuti vasangane nezvisungo zvese uye vaendese magwaro anotsigira ekunyorera vagari venzvimbo nekudyara.
Zvikumbiro zvichapihwa kukurumidza kurapwa kubva kuCustomship neInstitute Investment, Vanofanira Diligence Provider uye St. Kitts naNevis Passport Office. Sebhonasi maitiro aya anosanganisirawo kushandiswa nekugadziriswa kweSt. Christopher (St. Kitts) uye Nevis pasipoti.
Kunyorera uchishandisa iyo AAP kunogona kuona kuti chikumbiro chakapera mukati memazuva makumi matanhatu nemamwe maficha apedzwa mukati memazuva makumi matanhatu.
AAP process Fees (inosanganisira Yeakakodzera Dhivha Fees)
Munyoreri Mukuru: US $ 25,000.00
Anochengetwa pamusoro pemakore gumi nematanhatu: US $ 16
Pamusoro peiyo US $ 25,000.00 uye US $ 20,000.00 AAP michina yekubhadhara, imwe mari yekuwedzera yeUS $ 500.00 pamunhu inozoshanda pakugadziriswa kweSt Kitts naNevis Passport kune chero vanovimba vari pasi pemakore gumi nematanhatu.
Inzwa wakasununguka kubvunza Management Team yeChizvarwa ne Investment Unit kune chero kubvunza zvine chekuita neIzwi rekusimudza Muitiro.
Nekuda kwekuwedzera nguva yekutendeuka yechitatu bato nekuda kwekushingairira kwevanonyorera vanobva kudzimwe nyika dzinotevera havafanirwe neAAP:
Federal Republic yeNigeria,